History of Holy Quran Translation to Burmese (Myanmar) – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on March 24, 2009 October 12, 2009 by kyawkyawoo	Posted in Holy Quran Burmese TranslationTagged and 47:24 into Burmese, Bismilahh ( In The Name of Allah the Most Gracious, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, Ghazi Muhammed Hashim Quran translation, Haji U Kaalu, History of Holy Quran Translation to Burmese (Myanmar), Holy Quran in Burmese, Holy Quran Translation to Burmese Myanmar, Invitation to all Muslim Minorities, islam, ly Quran Translation to Burmese (Myanmar), Muffasirul Quran Allamah Ghazi Muhammed Hashim and late Maulana Maqsud Ahmad Khan., Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, religion, the Most Merciful)in Burmese Words., Thiripyanchi U Ba Sein, Translated by Ghazi Muhammad Hashim, Translation of Holy Quran 16:89, U Ba Sein Quaran translator
Holy Quran in Burmese , Translated by Ghazi Muhammad Hashim
Translation of Holy Quran 16:89, and 47:24 into Burmese
Bismilahh ( In The Name of Allah the Most Gracious, the Most Merciful)in Burmese Words.
(1) The first Burmese Quran translation was published in 1912. Haji U Kaalu translated it from Urdu translation of Mirza Hairat.
(2) The second Burmese Quran translation was published in 1962. Thiripyanchi U Ba Sein translated from Marmaduke Pickthal’s English Translation.
(3) The third Burmese Quran translation was published in three volumes starting from 1977 until 1980. It was direct translation work by the Holy Quran translation board of Burma. The chief translators were the late Muffasirul Quran Allamah Ghazi Muhammed Hashim and late Maulana Maqsud Ahmad Khan.
All of us should not forget to Dua for those people who brought the Arabic Quran into Burmese language, as they have used their best efforts and time for the Burmese Muslims to read and understand the teaching of Al Quran.
12 thoughts on “History of Holy Quran Translation to Burmese (Myanmar)”
ခုမှပဲ တိတိကျကျ သိတော့တယ်။ ပညာ အများကြီး ရပါတယ်။ ကျေးဇူး။
ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မပြည့်စုံသေးပါဘူး။ နောက်လိုသေးတဲ့စာအုပ်တွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ- မော်လာနာမူစာအဟ်မဒ်(မဇွာဟရီ) ရေးသားဖွင့်ဆိုထားတဲ့ ကျမ်း၊ အတွဲ (၆)တွဲ ရှိပါတယ်။ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့နေရာက မန္တလေးမှာပါ။
မော်လာနာကာရီမုဟမ္မဒ်ယူစွဖ်အဆ်အဒီ ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့ အာရဗီ- အူရ်ဒူ-မြန်မာ ဘာသာပြန်ကျမ်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ ဒိုအာတောင်းဆိုဖို့ နှိုးဆော်ထားတဲ့ သူတွေထဲမှာ အာရဗီကနေ မြန်မာဘာသာကို ပြန်ဆိုခဲ့ကြသောသူတွေကို အဓိက ထားဖော်ပြပါထားပါတယ်။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို အာရဗီကနေ မြန်မာကို တိုက်ရိုက်ပြန်ဆို နိုင်ခဲ့တဲ့သူကို မတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။ အားလုံးဟာ အူရ်ဒူ၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဖာရစီစာပေတွေနဲ့ ရေးသားပြန်ဆို၊ ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်းထားတဲ့ ကျမ်းတွေကို မှီငြမ်းကိုးကားပြီး ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုခဲ့ကြသောသူအပေါင်းလို့ဘဲ ဖော်ပြသင့်ပါတယ်။ အာရဗီမှ မြန်မာသို့ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ကြသောသူများလို့ လုံးဝသီးသန့် မဖော်ပြသင့်ပါဘူး။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို မြန်မာစာတတ် ပုဂ္ဂိုလ်များ နားလည်စေရန် မြန်မာဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုရေးသား ဖွင့်ဆိုခဲ့ကြသူများအားလုံးကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် နှစ်ဘ၀ နှစ်ဌာနတွင် ကောင်းချီးမင်္ဂလာ အဖြာဖြာပေးသနားတော်မူပါ။ ယင်းတို့၏အမှားအယွင်း ဟူဟူသမျှကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ။ ယာ- အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်။ အာမီးန်
nice to see your page and i learn from you also.
ALLAH is grate.
daughter of Ghazi Muhammad Hashim
Is this website an authentic source for the Burmese translation of the Qur’an?
Dear Dr Salim,
Sorry for late reply as I was attendingaseminar.
The Burmese Quran site is authentic, the work of Late Ghazi Mohammed Hashim and the team of experts from Burma.
For Burmese Muslims in US, if they know how to use Internet they can send comment to me even in Burmese language.
Or we have the society, but they must be able to go online as there are quiteanumber of resources written in Burmese language.
I will be in touch with you. Thank you for your comment and interest in helping Burmese Muslim Minority.
Dr Ebrahim says:
As Salaamu alikum wrt wbt
Recently I heard there appeared quran Translation in the website authored by U Htay Lwin Oo
in that there are deviations e.g the translator does not believe angles and Gabriel as mentioned in the Sura Al Qadr. Please investigate and clarify things before accepting the explanation.,
The author expressed that the previous learned Islamic scholars translated Quran in different languages were like fairy tales. In his translations in many places Jin , Gibrael, Angles, Iblis are human being. Adam was not sent down to the earth. His dwelling was originally on earth. Jesus (Pbuh) was not raised up as in the Quran. Syaitan was not created by fire as in the Quran. Mariam could not beavirgin pregnant logically without male partner and assuming Gibrael as her partner. Moses (PBUH) miracles were denied. He denies most of the Allah’s (SWT) miracles mentioned in the Holy Quran as not logical.. His explanation for Isra and Miraj (of Prophet Muhammad SAW) is entirely denial of what mentioned in the Hadith. Journey to Majid Al-aqsa is denied. The word Allah is not used by him. All muslims use the word Allah in prayers , Azan .etc. Allah said I have made Al-Quran in arabic easy for your tongue. We all must stick to Arabic words.
All prayers in Islam is in Arabic which cannot be replaced by Burmese or Pali words. His Pali words are more confusing.
The most insulting and unacceptable explanations written by him in many places are denial of Miracles of Allah (SWT) and regarded all the existing Quran translations are hear say and like folk tales/ fairy tales copied from the ancient christian stories in his explanations. He also wrote Islam isanew religion. Actually Islam is the religion of Adam and all the Prophets and all the previous revelations (Books), all the prophets, angels, are to be believed and accepted byamuslim..If one does not believe in angels he is notamuslim (Q Sura 2:98-99).
Hadith is the tool to understand the meaning of Quran. Hadith will guide us when, where, whyaparticular ayat was revealed to our Prophet. The author’s name is Htay lwin oo . Well any body hasaright to understand and translate Quran in his own way but Insulting the existing Translations as Fairy tales hear say quran and claiming his translations as Holy Quran is not acceptable. His book withatitle “2koran” hear say and Holy quran is on sale on line. Some of the Suras and ayats for quick reference are : Sura 2:30 , 2:37, 2:45, 3:45, 3:54, 3:59, 18:50, 4:157-158,,53:11-15,21:91 and his commentaries written in his website
are total deviations from our Islamic concepts. I request brothers and sisters in Islam to investigate and clarify things before accepting his explanations.
Please read Sura3verse 7
In Holy Quran there are verses like 1. that are entirely clear regarding Commandments, Obligatory duties, Legal laws and others are entirely clear and.
2.That are not entirely clear thereof,with hidden meanings which no one knows it except Allah.
For those who are firmly grounded in knowledge say “we believe in it ; the whole of it (clear or unclear verses) are from our lord.
As for those in whose hearts there is deviation from truth they follow that which is not entirely clear thereof , seeking for its hidden meaning , arguing , causing deviations, and trouble but none knows its hidden meanings except Allah.
Please read the Burmese translation as well.
Burmese translation of Surah 3:7 is as follows,
ထိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် အသင့်အပေါ်ဝယ်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို ထုတ်ပြန်ပို့ချ တော်မူသော အရှင်မြတ်ပင်တည်း။ ထိုကျမ်းမြတ် အနက် မပြောင်းမလွဲ ပေါ်လွင်ထင်ရှားပြတ်သား၍ အနက်အဓိပ္ပာယ် တစ်မျိုးတစ်စားတည်းထွက်သော အာယတ်တော်များလည်းရှိပေ၏။ ယင်းအာယတ်တော်များသည်သာလျှင် ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်၏မူလအရင်းခံ အခြေအမြစ်ဖြစ်လေသည်။ ထို့ပြင်တ၀ အခြားအာယတ်တော်များမှာမူကား အဓိပ္ပာယ်ပြားသော၊ ဆင်တူရိုးမှားဖြစ်သော အာယတ်တော်များလည်းရှိ၏။ သို့ရာတွင်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စိတ်နှလုံးတွင် သွေဖည်ယိမ်းယိုင်မှု ရှိသောသူတို့မူကား (လူခပင်းတို့အား သာသနာရေးတွင်) လမ်းမှားစေလို၍လည်းကောင်း၊ ထိုအာယတ်တော်များ၏ အဓိပ္ပာယ်များကို အမှားကောက်လို၍လည်းကောင်း၊ ယင်း ဆင်တူရိုးမှားအာယတ်တော်များကိုပင် လိုက်နာလိုက်စားကြကုန်၏။ အမှန်စင်စစ် ယင်းအဓိပ္ပာယ်ပြားသော ဆင်တူရိုးမှားဖြစ်သော အာယတ်တော်များ၏ မှန်ကန်သောအနက်အဓိပ္ပာယ်အလို သဘောကိုမူကား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှတပါး မည်သူမျှမသိချေ။သို့ရာတွင် ပညာအရာ၌ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာ ရင့်သန်သော ပါရဂူများကမူ (ကုရ်အာန်ကျမ်းလာ မုဟ်ကမာတ်၊မုတရှာ၊ ဗိဟာတ်၊ အာယတ်တော်များ) အားလုံးတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်အထံတော်မှပင် (ကျရောက်လာသော အာယတ်တော်များ) ဖြစ်ပေရာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယင်းအဓိပ္ပာယ်ပြားသော၊ ဆင်တူရိုးမှား ဖြစ်သောအာယတ်တော်များကိုလည်း (ခြွင်းချက်မရှိ လုံးဝ) ယုံကြည်ကြပါသည်ဟု ပြောဆိုကြကုန်၏။ အမှန်သော်ကား စင်ကြယ်သန့်ရှင်းအပြစ်ကင်းသည့် ပညာရှင်အပေါင်းတို့မှအပ အခြားသူများတရားလမ်းမှန် မရနိုင်ချေ။င်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စိတ်နှလုံးတွင် သွေဖည်ယိမ်းယိုင်မှု ရှိသောသူတို့မူကား (လူခပင်းတို့အား သာသနာရေးတွင်) လမ်းမှားစေလို၍လည်းကောင်း၊ ထိုအာယတ်တော်များ၏ အဓိပ္ပာယ်များကို အမှားကောက်လို၍လည်းကောင်း၊ ယင်း ဆင်တူရိုးမှားအာယတ်တော်များကိုပင် လိုက်နာလိုက်စားကြကုန်၏။ အမှန်စင်စစ် ယင်းအဓိပ္ပာယ်ပြားသော ဆင်တူရိုးမှားဖြစ်သော အာယတ်တော်များ၏ မှန်ကန်သောအနက်အဓိပ္ပာယ်အလို သဘောကိုမူကား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှတပါး မည်သူမျှမသိချေ။သို့ရာတွင် ပညာအရာ၌ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာ ရင့်သန်သော ပါရဂူများကမူ (ကုရ်အာန်ကျမ်းလာ မုဟ်ကမာတ်၊မုတရှာ၊ ဗိဟာတ်၊ အာယတ်တော်များ) အားလုံးတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မွေးမြူတော်မူသော အရှင်မြတ်အထံတော်မှပင် (ကျရောက်လာသော အာယတ်တော်များ) ဖြစ်ပေရာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယင်းအဓိပ္ပာယ်ပြားသော၊ ဆင်တူရိုးမှား ဖြစ်သောအာယတ်တော်များကိုလည်း (ခြွင်းချက်မရှိ လုံးဝ) ယုံကြည်ကြပါသည်ဟု ပြောဆိုကြကုန်၏။ အမှန်သော်ကား စင်ကြယ်သန့်ရှင်းအပြစ်ကင်းသည့် ပညာရှင်အပေါင်းတို့မှအပ အခြားသူများတရားလမ်းမှန် မရနိုင်ချေ။
Undestanding IslamးIslam ကိုနားလည်ခြင်းအပိုင်း(လေး)